> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka Motorola Droid Razr
Haddii aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado ama gurmad farriimaha si aad u your computer ka dibna Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) waxaa loogu talagalay adiga. Waa gobolka software farshaxanka soo kabsaday qalabka android (smartphone, kiniin ...). Ma aha oo kaliya waa qalab aad u awood badan, waxa kale oo codsi ah oo aad u qurux badan oo sahlan in ay isticmaalaan.
Laakiin ka hor inta aanad u isticmaali, waxaa jira hal arrin oo muhiim ah in aad u baahan tahay in aad ogaato ka hor inta aadan isticmaali Dr.Fone u android ama nooc kasta oo kale oo ka soo kabanaya software. Fadlan ha isticmaalin aad casriga la joogo aad tirtiray ama laga badiyay fariin aad rabto in aad soo kabsado. In la iska soo gelin faahfaahinta sida a woks qori xasuusta, laakiin muhiimad ahaan marka aad tirtirto fariin weli jiro wax raad ah waxaa ka mid ah meel aad qori xasuusta casriga ah. Laakiin haddii xogta cusub (fariimaha, sawiro, videos, dokumentiyo cusub, iwm ...) isticmaal meesha lagu kaydiyo halkaas oo fariin aad tirtiray ahaan jireen, ka dibna markii ay goobtan joogeen, farriimo aad tageen wanaag.
Dr.Fone for Android Soo kaban karto fariimaha tirtiray labada xidid iyo non-rujin Motorola Droid Razr. In hab geelaa, software waxay qaadan doontaa waqti dheer si loo farsameeyo maxaa yeelay waxa ay bogsan doonaan dhammaan xogta in ay ka heli kartaa telefoonka adiga oo ay ku jiraan xogta aan muhiim kuu ah (tusaale ahaan: Nidaamka xogta phone), halka aan dawliga ahayn rujin hab u waan ceshan doonaa oo kaliya xogta aad.
Ka soo kabashada fariimaha laga badiyay ka Motorola Droid Razr waa mahad mid aad u fudud in ay Dr.Fone u android. First of dhan, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo software halkan, ka dibna kaliya raacaan tilmaamaha tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
By ka dibna, waxaad arki doontaa ah pop-up aad Motorola Droid Razr codsanaya inaad u ogolaato qalab aad u noqon in hab user super. Just guji ogolaan on your Motorola Droid Razr ka dibna riix on bilowga on your computer inay sii wadaan geeddi-socodka.
Tallaabada 6. Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha la tirtiro
Haddii aad rabto in aad soo kabsado dhammaan fariimaha aad, in la hubiyo in farriimo sanduuqa ku Column hore sax oo guji badhanka soo kabsado. Haddii aad rabto in aad ku eegaan fariimaha aad iyo doorasho ah farriimaha gaar ah in aad rabto in aad soo kabsado, fadlan sax sanduuqa ku xiga si ay fariimaha aad rabto in aad soo kabsado guji soo kabsado.